octobre 2017 - Page 3 sur 71 -
Ambano Antsirabe II : Omby efatra indray no lasan’ny dahalo
31/10/2017 admintriatra 0
Matetika hitrangana asan-dahalo indray ao amin’ny kaominina Ambano Antsirabe II tato ho ato. Saika isan-kerinandro no handrenesana izany. Tsy voafaritra mazava aloha hatreto ny isan’ireo mpanafika, isan’ny mitondra faisana matetika ny tantsaha manana omby any …Tohiny
Anosibe : Kioska notafihina jiolahy nirongo basy
Nisehoana fanafihana mitam-piadiana indray teny Anosibe Ambohibarikely omaly tokony ho tamin’ny 11 ora antoandro. Tonga niditra tamin’ny kioska iray izay teny an-toerana ireo jiolahy telo lahy.Voatifitra tamin’izany ny iray tamin’ireo, fa ny roa kosa tratra …Tohiny
Fitondrana HAT : Inona no hamehana nanendrena an’i Reboza Julien?
Nametra-pialana ny faha-27 Mey 2013 ny VPM Hajo Andrianainarivelo rehefa namadika an-dRajoelina, ka nilatsaka ho kandidà filoham-pirenena. Ireo izay mahalala tsara an’i Hajo dia efa fantatra hatramin’ny fotoana nanendren’ny governemantan’ny mpanongam-panjakana azy ho VPM misahana …Tohiny
Fahombiazan’ny filoha iray : Manana vady hendry hoe?
“Fahombiazan’ny filoham-pirenena iray: Miankina amin’ny fahendren’ny vadiny”. Io no lohantenin’ny gazety Tia Tanindrazana omaly ary nasiana ny sarin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady. Naongan’ny vahoaka Filoham-pirenena telo no nirodana tamin’ny alalan’ny hetsi-bahoaka teto: Philibert Tsiranana (1972), …Tohiny
Filoha sinoa Xi Jinping : Nisaotra manokana ny Filoha malagasy
Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika entim-bahoakan’i Sina, Xi Jinping, manokana tao amin’ny Grand Palais tao Beijing ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambaran’ny Filoha sinoa ny hafaliany tamin’ny nandraisan’i Madagasikara sy ny Filoham-pirenena malagasy anjara ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : Hanao fanambarana
Epp Andrefanambohijanahary : 106 taona vao nisy fanavaozana